I-AC110V / 220V
Imigca yeFlexible Led
Imicu yeNeon ethambileyo
Icala elinye elikhuphayo
Icala eliphindwe kabini
Umgangatho okhupha i-360 Degree
Imigca yesiGaba esi-1 se-Wireless
Imicu yesiGaba sesi-2 engenazingcingo
Inkcazo: DC12V / 24V
Imigca ye-Flexible Led (IP20)
Iziqwengana zeSoft Neon (IP65)
I-AC110 / 220V
Ummeli / OEM / ODM
Ukusetyenziswa kunye nokukhethwa kwebhanti yesibane
ngomphathi ku 20-11-04
Ibhanti yesibane yahlulwe yibhanti yokukhanya enevolthi esezantsi kunye nebhanti eqhelekileyo yokukhanya. Kuthekani ngebhanti lokukhanya elisetyenziswe apha ngasentla? Ngokusetyenziswa kokukhanya okungangqalanga komthombo wokukhanya kwesikhukula, umthombo wokukhanya owongezelelweyo phantsi kwekhabhinethi, umthombo wokukhanya owongezelelweyo kwikhabhinethi kunye nomthombo wokukhanya wokuhombisa, ...
Isakhono sokukhetha kunye nokufakwa kwebhanti yokukhanya kwe-LED
Xa kuhonjiswa, sihlala sibona ukuba kukhokelwe ibhendi ekhanyayo kuluhlu lokuhombisa, kodwa uninzi lwabanini abazi ukuba yintoni. Ngapha koko, oku kuqhelekile kakhulu. Okokuqala, akukho kunxibelelana okuninzi. Okwesibini, kuba ibhanti yokukhanya ifihliwe, sibona ukukhanya kwayo kuphela, kodwa asikwazi ukubona isithunzi sayo. Kwi ...
I-123th Canton Fair iphele ngempumelelo
ngomphathi ku 20-10-19
UJoineonlux ujolise kuphuhliso, imveliso kunye nentengiso yemigca ye-LED. Iphumelele indumiso evela kubathengi bamanye amazwe kwaye ikwazile ukutsala umdla ngokubanzi. Iivenkile ziyadlamka, zinengxolo kwaye zinengxolo. Uninzi lwabathengi bathetha malunga neenkcukacha kwibhokisi, kwaye kukho amathuba obushushu ...
I-121th Canton Fair iphele ngempumelelo
UZhongshan Joyeonlux uneminyaka eli-17 yamava kwaye uhlala egcina itekhnoloji yakutshanje ngokomgangatho wemveliso, inkonzo yabathengi kunye noyilo lwemveliso. Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba sinikela ingqalelo kuyilo olulula lokhuseleko kunye nomgangatho. I-Joyeonlux ibonelela abathengi ngeendlela ezahlukeneyo ...
Umzekelo, isibane somcu osicaba kunye nesibane somcaba osicaba singahlulwa ngokweendidi ezintathu, okt i-LED yesiqhelo, isibane somcaba osicaba, kunye nesibane esisecaleni.
1.Ukukhanya okukhanyayo kwe-LED kuhlanganiswe ne-FPC kunye ne-SMD ye-LED, ukuze ubukhulu bemveliso bububunzima bengqekembe kuphela, kwaye abuthathi ndawo; Ukubalula ngokubanzi kubandakanya ii-18s ze-LED ezinobude obungama-30cm, ii-24 ze-LED kunye nee-LED ezili-15, ii-LED ezingama-24 kunye nee-LED ezingama-30 nge50c ...
Athini amanyathelo okhuseleko xa kufakelwa ibhanti yokukhanya kwe-LED
Qaphela ukufakelwa kwebhanti yokukhanya kwe-LED: indlela yeentambo zebhanti yokukhanya kwe-LED. Umbane oqhelekileyo webhanti yokukhanya kwe-LED yi-DC 12V, ke ukutshintsha umbane kuyafuneka. Ubungakanani bokunikezelwa kwamandla kuxhomekeke kumandla kunye nobude boqhagamshelo lwebhanti yokukhanya kwe-LED. Iingcingo zemono ...
Ukukhethwa kwebhanti yokukhanya kwe-LED kuxhomekeke kwinjongo yokufaka kunye nokukhanyisa
Umahluko phakathi kwebhanti yokukhanya kwe-high-voltage kunye ne-low-voltage light belt yile: ibhanti yokukhanya kwe-high-voltage ngokubanzi yi-50/100 yemitha yokuqengqeleka, ibhanti yokukhanya kwevolthi ngokubanzi yimitha ye-5 yemitha, ibhanti yokukhanya enevolthi ephezulu ayinamanzi, iphantsi ibhanti yokukhanya ayinamanzi okanye akunjalo, isibane ...
Ngenisa idilesi yemeyile yakho ukufumana iindaba zeMetal kunye neziganeko zamva nje.